नखाएको बिष लाग्दैन माननीय ज्यू ! - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
नखाएको बिष लाग्दैन माननीय ज्यू !
Posted by Headline Nepal | २५ पुष २०७३, सोमबार १८:१६ |
कमै मात्र जनप्रतिनिधिहरुलाई नजिकबाट चिन्दछु म । रामहरी खतिवडालाई चिन्नुका पछाडी पनि केही संयोगहरु रहे । सञ्चार माध्यममा बढी छाईरहने नाममा उहाँको अनुहार चिरपरिचित नै रह्यो । जनजीविकाका बिषयहरुलाई जोडतोडले सँसदमा उठाईरहँदा उहाँलाई चिनेको छु । राष्ट्रिय एजेन्डाका बिषयहरुमा जुनसुकै बेला पनि उहाँको आवाज सुनेको छु ।
भूकम्पले थिलथिलो बनाईरहँदा पीडितहरुलाई राहत दिनुपर्छ भनेर पटक पटक बोल्ने साँसद खतिवडालाई धेरै पहिले नै मैले सेल्युट गरिसकेको छु ।
नेताहरुको नामसंग आलोचना पनि जोडिने गरेको पाउँछु । तर रामहरी खतिवडालाई चिने देखि नै मैले बुझेको छु की देश र जनताको बिषयमा सँधै चिन्ता गरिरहनेका रुपमा । आफ्नो कर्तब्य र जिम्मेवारीमा सँधै ईमान्दार सांसदका रुपमा खतिवडालाई मैले पढेको छु ।
पदीय गरिमालाई उचाईमा राखिरहन खतिवडा जस्तै साँसदहरुको लगनले समेत पनि भूमिका खेलेको छ ।
सबैभन्दा बढी जिल्ला जाने सासदको नाम पनि हो रामहरी खतिवडा । ओखलढुँगामा गएर उहाँको क्षेत्रमा बुझ्दा पनि हुन्छ, जनतालाई सोध्दा पनि हुन्छ की को हो रामहरी खतिवडा भनेर ।
आफ्नो क्षेत्रका जनताहरुको सानो भन्दा सानो समस्याहरुस देखि हर सुख दुखमा सँगै हुने साँसद हुन् खतिवडा ।
जिल्लामा बिकासका योजनाहरु लाने देखि जनताहरुलाई रोजगारी प्रबन्ध मिलाउने सम्ममा काम भएको छ । सरकारले नै भूकम्प पीडितहरुको चित्त बुझाउन सकेको छैन तर रामहरी खतिवडाले जिल्लाका पीडितहरुलाई सकेसम्म राहत दिएका छन् ।
जिल्लाको स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, बिजुली लगायतका पूर्बाधारहरुको कुशल ब्यबस्थापक हो उहाँ एक साँसदका रुपमा । जुनसुकै काम पर्दा पनि जनता उहाँलाई सोझै सम्पर्क गर्छन । जनताको दुख पीर र समस्या समाधानका लागि उहाँ जहिल्यै तयार हुनुहुन्छ, उहाँको फोन जनताका लागि सँधै खुल्ला छ ।
आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रका जनताहरुको घर घरमा गएर दुख सुखमा संगै भईरहेको भेटिन्छ । बिबाह, ब्रतबन्ध होस् जन्मदिन या रुद्री वा मलामी नै किन नहोस् जनतासंगै हुनुहुन्छ उहाँ।
जिल्लामा नै गएर घरदैलो गरिरहने अनि काठमाडौँ आएको समयमा पनि जनताहरुको सेवामा कहिले अस्पताल त कहिले कता जनताको समस्यामा सँग सँगै भईरहने पात्र हो उहाँ ।
मानिसको चरित्र हल्लाले होईन ब्यबहारले जाँचिन्छ । त्यही ब्यबहारको प्रत्यक्षदर्शीका नाताले यो बेलामा आँखाले देखेको र मनले बुझेको कुरा देशलाई सुनाउन आतुर छु । रामहरी खतिवडा जस्तो साँसद देशले पाएकोमा गर्व गर्दछु ।
नखाएको बिष कहिल्यै लाग्दैन । यो त ब्यक्तिको खास ब्यक्तित्व चिनाउने अवसर पनि हो । अब चिन्नपर्छ देशले रामहरी खतिवडाको राजनीतिक लगन, मेहनत, परिश्रम अनि लगानीलाई ।
देश बनेन भनेर गुनासो मात्र होईन देशका लागि को को आफैँलाई खियाएर पनि लागिरहेका छन् भन्ने कुराको पनि मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ । अनि राजनीतिक नेतृत्वका लागि आफूँले गर्नुपर्ने सहयोगर सहकार्यमा पनि सबै जनताहरुले भूमिका निभाउनुपर्छ । सबै मिलेर नै बन्ने हो देश । सबैले देखाएर नै चिनाउने हो उच्च चरित्र र ब्यबहार ।
उहाँ जस्तो नेताको मार्गनिर्देशनबाट नै केही गरौँ भन्ने जाँगर चलेको छ ममा । अब सबै युवाले सम्मान दिने र लिने संस्कारको विकास गर्दै सारा उर्जा मूलुकको विकास र समृद्धिमा लगाऔँ ।
भूपी शेरचनले भने झैँ यतिबेला देश साँच्चै हल्लै हल्लाको भएको छ । अपुष्ट हल्ला प्रायोजित रुपमा कहिँ कतैबाट मच्चाईन्छ भने त्यो क्षणिक बादल मात्र हुनेछ । जब सूर्यको रश्मिले आफैँ जमिनलाई देख्छ तब यतार्थता र सत्यता पुष्टि भईहाल्छ । अनि त दूधको दूध पानीको पानी ।
सम्भावनाको सागरसरी खतिवडाको उचाईले निरन्तरता पाईरहनेछ, उहाँको लगन र मेहनत अनवरत रहिरहनेछ देश र जनताका लागि सँधै सँधै ।
Previousलागूऔषधका फरार अभियुक्त १५ वर्षपछि पक्राउ
Next‘संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेर सरकारले गल्ती गर्यो’ : थापा
२७ बैशाख २०७४, बुधबार ०८:२८
‘राष्ट्रपति भण्डारीलाई अनुचित दबाव दिएर अध्यादेश पारित गराउन बाध्य पारियो’ : ओली
१४ पुष २०७४, शुक्रबार १६:११
सिन्धुलीको टर्किवेशीमा जिप दुर्घटना, चारजनाको मृत्यु
२० कार्तिक २०७४, सोमबार १०:१७
एकैचोटी ३० जना सचिवको सरुवा, कसलाई कहाँ पुर्याइयो ?
२४ चैत्र २०७४, शनिबार १०:२५